एसएलसीमा फेल भएपछि ... - फिचर - साप्ताहिक
खुसीनै जीवनको असली स्वाद हो
बिहान ११ बज्यो । पुतलीसडक स्थित एक क्याफेमा टुप्लुक्क उपस्थित भए उनी । रातो सोफामा थ्याच्च बसे । सायद, थाकेका थिए कि ! एक गिलास पानी अर्डर गरे, वेटरसँग । गिलासको पानी एकैपटकमा रित्याइदिए । कहिलेकाँही रित्तो हुँदा पनि खुसी लाग्छ । दयाहाङ राई भन्छन्, ‘यो गिलास अहिले रित्तो भयो । खुसी भएको होला ।’ दयाहाङलाई पनि धेरै पटक त्यो गिलास जस्तै रित्तो र शुन्य महशुस भएको छ । ‘मानिसले कहिलेकाँही रित्तिएका बेला धेरै कुरा सिक्न पाउँछ । त्यो हरेक मानिसका लागि खुसीको कुरा हो,’ – उनले भने ।
‘जीवनमा धेरै पटक ठक्कर पाएको छु । धेरै पटक धेरैको बचन पाएको छु, धेरै भन्दा धेरै दुःखी भएको छु,’ उनले थपे, ‘यी सबै कुराले मलाई संघर्ष गर्न सिकायो । चोटहरु समयको रफ्तारसँगै पाइने कुरा हुन् भन्ने कुरा जतिबेला उनले बुझे, अनि चनाको भरमा दिन कटाउन पनि उनलाई कुनै गाह्रो भएन । दयाहाङलाई लाग्छ, जस्तोसुकै समस्या र सफलतामा पनि खुसी रहन सिक्यौं भने उत्तिनै हाम्रो जीवन सहज हुन्छ । पिडा, तनाव, रिस, आवेग, डर, भय, दुःख कस्लाई पर्दैन ? उनले थपे, ‘यो हरेकको जीवनमा आइपर्ने स्टेप हुन्, तर उमंगित र उत्साहित हुन छोड्नु हुन्न । वास्तवमा खुसीनै जीवनको असली स्वाद हो ।’
अति व्यस्त छ दयाहाङको जीवन । चलचित्र क्षेत्रमा लागेपछि आफ्ना–आफन्तका लागि समय दिन सकेनन् । आफ्नै श्रीमती, छोराछोरी, आमासँग बसेर कुराकानी गर्न समेत सहज छैन । आफ्नै लागि समय छैन । तर, कलाकारिता उनले रोजेको काम हो । महत्वकांक्षा छैन, लोभ धेरै छ । लोभ ? हाँस्दै भने, ‘मलाई कामको भोक र कामको लोभ धेरै छ ।’ अति व्यस्तताका कारण लामो समयदेखि सँगै बसेर मःम खाएका, रक्सी खाएका साथिभाईहरुसँग नभेटेका उनले उनीहरुलाई चाँडै भेट्नेवाला छन् । ‘धरै सम्बन्ध पातलिए । यो पनि एक भोगाई हो, कुनै दिन पुरानै अवस्थामा फर्किनेछु,’ अनुहारमा चमकता ल्याउँदै उनले भने, ‘परिस्थिती फरक होला । मनहरु केही परिवर्तन भएको होला । तर, साथिभाईहरुले बुझ्नेछन्, म त्यो समयको पर्खाइमा छु, जतिबेला उनीहरुका भोगाई र मेरा भोगाई शेयर हुनेछन् ।’ उनलाई लाग्छ, भोगाई मानिसको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो ।
एउटा प्रशंग ।
हरीहर शर्मा राष्ट्रिय नाचघरका जिएम थिए । त्यतिबेला नेपालभरका रंगकर्मीलाई वर्कशप दिने तयारी गरिएको थियो । उक्त कुरा सुनेपछि दयाहाङ हरीहरलाई भेट्न पुगे । सामान्य शैलीमा प्रस्तुत भए ।
पहिलोपटक मिठो पारामा उनले ढाँटे । ग्रिन सिग्नल पाएपछि दयाहाङ फर्किए । दुईदिनपछि पहिलो वर्कसपमा सहभागी हुने अवसर पाए । मेरा लागि त्यो सबैभन्दा ठुलो सफलता थियो, उनले भने, ‘त्यसपछि धेरै नाटकहरु गर्न पाएँ, टेलिसिरियल गर्न पाएँ ।’ त्यसपछि मात्रै उनलाई अब नाटकले मात्रै पुग्दैन भन्ने लाग्न थालेको हो । ३ बर्ष नाटक घर र टेलिसिरियलमा व्यस्त भएका उनले त्यसपछि अनुप बरालको एक्टर स्टुडियोमा कक्षा लिए । यदि दयाहाङले सिपालु पारामा ढाँट्न नजानेको भए सायद यो स्थानसम्म आउन सहज थिएन । भन्छन्, ‘जीवनमा कहिलेकाहि ढाँट्न पनि जान्नुपर्दोरहेछ ।’
दयाहाङ कलाकार कसरी बने ? धेरैलाई थाहा छैन । भोजपुरको खावामा हुर्किए । कक्षामा कहिल्यै प्रथम नभए पनि चार–पाँच नम्बरमा पर्थे । कहिल्यै फेल नभएका दयाहाङ १० कक्षामा फेल भए । केहि दिनपछि मार्कसिट हेरे, ‘विज्ञान’ लागेको रहेछ । उनी फेल हुँदा सबैभन्दा धेरै पिडामा प–र्यो, उनको परिवार । साइन्स पढाउने परिवारको सपना चकनाचुर भयो । एक वर्षपछि परिक्षा दिनुपर्ने, अब के गर्नु एक वर्ष ? त्यो समयमा उनले थुप्रै कुराहरु पढे । जिबन पढे । असफलता के रहेछ ? त्यो बुझे । ‘छोरा–छोरीको असफलताका कारण बुबा–आमाहरुलाई कति फरक पर्दोरहेछ भन्ने कुरा जान्न पाएँ, उनले भने, ‘फेल भएपछि संगत फेरिए । धेरैका माया फेरिए ।’ त्यो समय बुबा–आमालाई सहयोग गरे । हलो जोते । गाई भैँसीलाई घाँस काट्न गए । बाख्रा चराउन थाले ।
एकदमै सामान्य परिवारका ज्ञानी छोराका रुपमा चर्चित दयाहाङको जीवन फेल भएपछि अर्कै बाटोमा मोडियो । सायद पहिलोपटक सबैभन्दा धेरै तनाबमा गएको त्यतिबेला होला, उनले भने, ‘त्यो बेलामा किताब पढ्ने, रेडियो नेपाल सुन्ने गरेँ । साहित्यमा रुचि दिने गरेँ । पेन्टिङमा रुचि गयो । केही नपढेरै एक वर्षपछि परिक्षा दिएँ, ७१ अंक ल्याएँ ।
अब प्लस टु पढ्नुपर्छ । कहाँ जाने ? काठमाण्डौं आउन खासै पैसा छैन ।
भोजपुर कलेजमा आइए–बिए पढे । त्यो बेला आर्ट र साहित्यप्रतिको झुकाब देखाएर उनी काठमाण्डौं आए । उनी पहिलो पटकमै एसएलसी पास भएका थिए भने, विज्ञान पढ्नुपथ्र्यो । बाटो अर्कै हुन्थ्यो । फेल भएपश्चात् कला क्षेत्रमा रुचि गयो । दयाहाङ भन्छन्, ‘पास भएको भए म कलाकारिता क्षेत्रमा आउने थिइनँ ।’
गीत हिट भएपछि संगीतकारलाई पुरस्कार
रेखा भावुक भएपछि